Kitra – Fifanintsanana ny «Can 2021»: mety handrafitra ny Barea i Ajorque | NewsMada
Kitra – Fifanintsanana ny «Can 2021»: mety handrafitra ny Barea i Ajorque
Ho fanomanana ny lalao fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra na ny «Can 2021», hataon’ny Barea de Madagascar, nampahafantatra ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) fa hanomboka ny 11 novambra ho avy izao ny fampivondronana ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy.
Efa nalefa any amin’ny klioba misy azy ireo tsirairay avy ny taratasy fampiantsoana mahakasika izany. Raha tsiahivina, handray an’i Etiopia, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny Barea de Madagascar, ny 16 novambra ho avy izao, eo amin’ny lalao voalohany. Ny 19 novambra kosa no hanafika any Niamey ka hikatroka amin’i Niger, eo amin’ity lalaom-bondrona ity.
Araka ny vaovao re, mbola hanatevina ny Barea de Madagascar avokoa ireo mpilalao rehetra niatrika ny «Can 2019 », natao tany Egypta farany teo. Ankoatra azy ireo, mety hisy mpilalao mpila ravinahitra vaovao ihany koa ho avy ka anarana efa re siosio i Ludovic Ajorque. Fantatra koa fa hiverina indray i Zotsara, taorian’ny faharatrana nahazo azy. Mbola baraingo kosa ny amin’ireo mpilalao eto an-toerana, izay nahabe resaka ny zava-bitany taorian’ny fifanintsanana ho an’ny «Chan 2020». Hivoaka amin’ny herinandro ho avy io, raha tsy misy ny fiovana, ny anaran’ireo mpilalao handrafitra ny Barea de Madagascar.